September | 2011 | My Burmese Blog
Monthly Archives: September 2011	Once Again In Bangkok ~ 1
On September 30, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Travel	ဒီနေ့ မနက်မှာ ဘန်ကောက် ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ တစ်ယောက်ထဲလာတာပေါ့။ သုဝဏ္ဏဘူမိ လေဆိပ်မှာ ဆင်းပြီးတာနဲ့ အရင်တစ်ခေါက်ကလို ကားမစီးတော့ပဲ ငွေကုန်သက်သာအောင် sky train စမ်းစီးဖြစ်ပါတယ်။ Sky train ဆိုတော့ တာမင်နယ်တွေ အင်မီဂရေးရှင်းတွေ ဖြတ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ထပ်အပေါ် တက်ကြည့်တာပေါ့ ဘာမှမတွေ့လို့ အင်ဖော်မေးရှင်းစင်တာမှာ မေးလိုက်တော့ မြေအောက်ထဲမှာ ဆိုတာနဲ့ အောက်ထဲ ဆင်းရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အောက်ထဲမှာပါ Google Map မှာ ညကတည်းက ကြည့်ပြီးသား Phaya Thai အထိ စီးရမှာ ဆိုတော့ မေးလိုက်တော့ ၄၅ ဘတ်ကျပါတယ်တဲ့။
Personal, Travel	Continue Reading
Democracy Activists Pray At Shwe Da Gon Pagoda
On September 27, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Myanmar news	ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် နေ့မှာ မနက် NLD ရုံးဘက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ တည်ထောင်တဲ့ နှစ်ပတ်လည် ရှိတာကြောင့်ပါ… ဓာတ်ပုံတော့ သေချာမရိုက်ဖြစ်ပါဘူး မဟုတ်လဲ သတင်းအနေနဲ့ သုံးမှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် အနီးအနားကနေပဲ စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ပွဲပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မှာ ဒီနေ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပွဲ ရှိတယ် လို့ ပြောကြတာနဲ့ ဘုရား ရင်ပြင်တော်ပေါ်ကို အခြား စီနီယာ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တွေ နဲ့ အတူတူ တက်ခဲ့ပါတယ်။
Myanmar news, Photo News	Continue Reading
On September 25, 2011	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Perspective	STANDARD ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြန်မာလို အားဖြင့် အဆင့်အတန်း ဒါမှမဟုတ် စံသတ်မှတ်ချက် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း တွေးမိနေတဲ့ အတွေးတွေက ကျွန်တော်တို့မှာ စံသတ်မှတ်ချက် ဆိုတာကော ရှိရဲ့လားပေါ့။ မနေ့ညက အိမ်အပြန်လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ လမ်းဘေးက ကားတွေ ကြည့်ရင်းလဲ စဉ်းစားမိတယ် ဒီကားတွေ ဘယ် စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ သွင်းနေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အခုဆို ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ လွှတ်တော်ဆိုတာတွေလဲ ပေါ်လာပါပြီ။ မြန်မာပြည်အတွက် လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် စံသတ်မှတ်ချက်တွေ လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတာ ခုထိမတွေ့ရသေးဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကတော့ စံသတ်မှတ်ချက် မရှိသရွှေ့ အဆင့်အတန်း မရှိသေးတဲ့ သူအဖြစ် ခံယူမိနေဦးမှာပါပဲ။ Knowledge, Perspective	Continue Reading
Yangon Wedding Fair 2011
On September 19, 2011	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- Myanmar news, Photojournalism	မနေ့က စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ မနက် ၉ နာရီ အရောက် Park Royal Hotel ကို သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ Wedding Fair 2011 ပွဲ ရှိတာကိုး ပွဲက ၁၀ နာရီစမှာ ရောက်သွားတော့ ခန်းမနဲ့ ကော်ရစ်တာတစ်လျောက်မှာ မင်္ဂလာခန်းဝင် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေ၊ ဝတ်စုံအရောင်းဆိုင်တွေ၊ မိတ်ကပ် အရောင်းဆိုင်တွေ တွေ့ရတယ်။ ခန်းမကတော့ ကျဉ်းတယ်ဗျ မီဒီယာတွေကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ နေရာပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ Photo News	Continue Reading
Canon to Announce 5D Mark III ?
On September 18, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Camera	မနေ့က Canon ကနေ နိုင်ငံခြားက ကင်မရာ industry ထဲက လူတွေကို “The Story Begins” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ November3ရက်နေ့မှာ Hollywood မှာ ပွဲလုပ်ဖို့ ဖိတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီပွဲက သေချာပါတယ် Canon ရဲ့ full frame ကင်မရာ အသစ် 5D Mark III စပြီး ပွဲထုတ်မှာပါ။ အရင် 5D Mark II က ထုတ်ထားတာ တော်တော်ကြာနေပြီ ဖြစ်သလို လက်ရှိ အချိန်မှာ အခြား မော်ဒယ်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တော်တော် နောက်ကျနေပါပြီ ဒါကြောင့် update လုပ်တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mark III မှာ သေချာတာကတော့ HD ဗီဒီယို အတွက်လဲ တော်တော် ကောင်းအောင် ပြင်ထားမှာ သေချာပါတယ် ဒီတစ်ခါပွဲလုပ်မယ့် နေရာကိုက Hollywood ဖြစ်နေတာက အဆန်းကိုးဗျ။
DSLR	Continue Reading
V-Finder With Eye Cup
On September 17, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Videography	လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က DSLR ကင်မရာအတွက် မှာထားတဲ့ LCDVF (LCD View Finder) တစ်ခု ရောက်လာပါတယ်။ အသိအကိုတစ်ယောက် ယူလာပေးတာပါ မှာထားတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကပါ။ တံဆိပ်က V-Finder ဖြစ်ပါတယ်။ မဝယ်ခင်ကတည်းက အွန်လိုင်းမှာကော အရင်တစ်ခါ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Philip Bloom ဗီဒီယိုထဲပါတဲ့ Zacuto ရဲ့ Z-Finder လဲတွေ့တယ်ပေါ့ ဒင်းကတော့ စျေးကြီးတယ်ခင်ဗျ 250$ လောက်ရှိတာနဲ့ 50$ လောက်ပဲရှိတဲ့ V-Finder ယူဖြစ်ပါတယ်။
Videography	Continue Reading
Super 8 will come out with Myanmar Unicode!! Umm
On September 16, 2011	by Htoo Tay Zar	With	11 Comments	- Myanmar news, Windows	ဒီနေ့ facebook မှာ မောင်ပြုံး နဲ့ ကိုမောင်မောင်ဆန်း တို့ ပြောလာလို့ အသစ်ထွက်မယ့် Microsoft Windows 8 မှာ မြန်မာယူနီကုတ် ဖောင့် စပြီး built in ပါတော့မယ် ဆိုတာသိရပါတယ်။ Microsoft က Windows 8 Developer Preview ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ကမှ ထုတ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး UI က Windows Phone7OS လို လေးထောင့်ကွက်လေးတွေနဲ့ ဆိုတာ CNET TV မှာ တစ်နေကမှ ကြည့်ထားမိပြီး download ဆွဲသေးတယ် 3.6 GB ဆိုတော့ တစ်ဝက်နဲ့ တင် မတက်တာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်တော့တာ ဒီနေ့ ယူနီကုတ် ဖောင့် တရားဝင် ပါမယ် ကြားရတော့ တော်တော်ပျော်သွားပါတယ်။
Burmese, Myanmar news, Unicode	Continue Reading
On September 9, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Blogging	မနက်ဖြန် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ Myanmar Bloggers Society ကနေ ဦးဆောင်လုပ်မယ့် seminar တစ်ခုကို Info-Tech မှာ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲက MBS ရဲ့ ၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ များ လမ်းကြုံခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ် အားရင်ဖြစ်ဖြစ် ကြွရောက်ပေးဖို့ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ Blogging, MBS	Older Entries	Recent Posts